Waxaan ka shaqeyneynay goob macaamiil qurux badan oo loogu talagalay KA + A, shirkad sumadeyn iyo naqshadeyn aad u guuleysatay. Waxaan iskaashi la yeelanay macaamiil badan… waxay soo saaraan astaamaynta iyo naqshadeynta ka dibna waanu u habeynnaa, u hagaajinaynaa oo ugu darnaa macaamiisheena Waxay ahayd wax cajiib ah tan iyo markii naqshadeeyayaashoodu aysan dhisin oo keliya goobo qurux badan, waxay sidoo kale qoraan koodh qurux badan.
Macaamiilkeennu wuxuu na weydiistay inaan ku darno sawirka LinkedIn oo ku xirno midigta hoose ee bogooda. Markii aan si dhow u eegnay, waxaan ogaanay inaysan ahayn wax sawir ah haba yaraatee. Waxay ahayd font soo bandhigaysa Twitter iyo Facebook! Sameynta xoogaa jabsasho deg deg ah, waxaan awoodnay inaan aragno inay hirgeliyeen astaamaha bulshada ee Symbolset.
Tani waa mid aad ufiican oo wax ku ool ah! Fonteyaasha waa la beddeli karaa, waxay yeelan karaan midab, waxayna yeelan karaan stylings kale oo laga mariyo CSS, sida hover tusaale ahaan. Fontkuna si xarago leh ayey u shubtaan. Marka laga eego dhinaca horumarka, uma baahnin inaan naqshadeeyeyaasheena soo saarno astaamo bulsheed cusub oo isku midab, cabir iyo qaab ah kuwa kale. Waxaan si fudud u isticmaalnay lambarka HTML ee astaanta 'LinkedIn', kuna duub sumad xarfaha, ka dibna waan tagnay!
Mahadsanid KA + A ee hirgelinta noocan oo kale ah. Waan hubaa inaan ka heli doonno tan fursado kale oo aan ku darsano astaamaha Symbolset bogaggayaga. Xusuus-qorkii ugu dambeeyay, ma ahan oo keliya inay leeyihiin Icons Bulsho, waxay leeyihiin dhowr taxane oo noocyo kale ah oo calaamado ah.